I-GvSIG vrs. Okufakiwe, amafomu okufaka - Geofumed
I-GvSIG vrs. Okufakiwe, amafomu wokufaka
Julayi, 2008 I-GvSIG, GIS ezininginingi
Usuku oluhle, ukufundwa okuhle nokucaca kangcono mayelana nokuthi i-GvSIG yenza kanjani futhi Yebo, ukwazi ukuliqhathanisa ne-Manifold
Ake sibone ukuthi lawa mathuluzi amabili aziphatha kanjani kumafomethi awawafunda:
Ukuphathwa Kwephrojekthi: Ifomethi ye-gvp ingumphathi wedatha, ayiqukethe ulwazi ngaphakathi. Kufana ne-ArcView apr, noma njenge-ArcMap mxd. Ungakwazi "ukuxhumanisa" idatha yangaphandle Ukuphathwa Kwephrojekthi: I-Manifold format ihlobo lokuphatha, kodwa ingaqukatha idatha ngaphakathi, kokubili i-vector, ithebula ne-raster. Ungagcina futhi idatha emininingwaneni yangaphandle (njenge-ArcView geodatabase) futhi "ingaxhumanisa" idatha yangaphandle
Amadokhumenti: Ngaphakathi kwephrojekthi ye-GvSIG, ilawula izinhlobo ezintathu zamadokhumenti: Ukubukwa, Amathebula ne-Amamephu. Kuyafana nokuthi kwakunjani ku-ArcView (ukubukwa, amathebula, izakhiwo). Imibono ingaba nezendlalelo eziningana futhi ungenza amaqoqo afana nezendlalelo ze-ArcMap Izingxenye: Ngaphakathi kwephrojekthi ebonakalayo, izingxenye ezilingana nalokho okuthathwa yi-GvSIG kuyi "Amamephu, amathebula, nezinhlelo".
Ukuphathwa kule mvelo ihlukile kakhulu phakathi kwakho kokubili ezisekelweni, nakuba kungenzeka ukwenza okufanayo, ezininginingi izibambo 16 izinhlobo izingxenye ngaphansi alolu kuhlanganise nezinhlobo, ihluzo, evele, amaphrofayli, amafolda namazwana.
Amafayela we-Vector: I-GvSIG ingafunda kml / kmz, dxf, dwg 2000, dgn i-V7.
Ungahlela i-shp ne-dxf Amafayela we-Vector: Ezininginingi kudinga amafayela okungenisa Vector (ayikwazi ukwenza ngendlela linkar), futhi ibona KML / KMZ, DWG R13, R14 futhi R15 (2000) futhi dxf2000 futhi dngv7. I-Manifold ayikwazi ukuhlela lezi zakhiwo, uma zingeniswa ziba imidwebo ngaphakathi kwedatha engaba ngaphandle noma iqukethe ngaphakathi .map
Amanye amafomethi: GvSIG Ungaxhuma ehambisanayo idatha izakhiwo ezifana OGC WFS, WCS futhi ... ArcIMS Web Map yokuqukethwe futhi
futhi nge-JDBC kusuka ku-MySQL, i-SQL ne-PostGIS Amanye amafomethi: Ezininginingi Ungakwazi ukungenisa (ngefomu vector) inombolo enkulu takhiwo, kuhlanganise e00, CSV, ithebhu thumela, GML, html, IDRISI VCT, mif, XLS imithombo yedatha kuhlanganise Oracle, SQL futhi ODBC
Iningi labo lingavunyelwa ngendlela "exhunywe"
Ngaphandle kwamafomu okungewona ama-georeferenced, uMnuSID, ECW, ENVI kanye ne-GeoTIFF afakiwe; Ungase futhi uxhumane nezinsizakalo ze-WMS nezinsiza ze-ArcIMS Izithombe:
Ngaphandle ifomethi non-georeferenced, isekela SID, Envi, Spot, ECWP nezinye imithombo eminingi idatha kokubili amazwe noma "linkados".
Kudinga i-Plugin ye-MrSID kodwa isebenza kancane.
Iphinde ixhumane nezinsizakalo ze-OGC
Ukwengeza ungakwazi ukuxhuma amasevisi we-Google Earth, Virtual Earth, Yahoo Maps, Google Street
Ngokuvamile, i-GvSIG igcina isizathu sayo sokudala: ukuhambisana namazinga we-OGC namafomethi wesofthiwe aziwa kakhulu Ezininginingi sinezici eziningi ngokuya ukuqashelwa takhiwo ehlukahlukene, ngisho isekela amazinga OGC kusukela 6 hhayi semthethweni okufushane kwedivayisi. Lapho abantu bebuza bethi ngengqikithi yezinto ezimangaza efanayo inkonzo yakhe: "amazinga OGC aphelelwe yisikhathi"
I-ArcView DGN DWG Google Earth I-GvSIG OS KML GIS ezininginingi shp
Thumela Previous«Langaphambilini I-GvSIG: Ukuqala kokuqala
Post Next Nginakho nokuphilaOlandelayo "